Yan Aung: ကျွန်တော့်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အမူအကျင့် (၁၀) မျိုး
အားတဲ့တစ်ရက်ပေါ့ (မရေးတော့ ဘာဖြစ်လဲ) :P
ကိုမျိုးကြီးရေးတဲ့ Project ကို Google က Microsoft နဲ့ အပြိုင်ဈေးပေးပြီးမှ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ သဘောကွဲလွဲချက်ကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်တော့တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်. ဘာမဆို လိုက်ဝယ်နေတဲ့ Google တောင်မ၀ယ်ဘူး ဆိုပြီးတော့ Microsoft တို့ Apple တို့လည်း လက်ရှောင်ရော. နောက်ဆုံး ဘယ်သူမှ မ၀ယ်တာနဲ့ပဲ BaganNet က ကိုတေဇက အောက်ဈေးနဲ့ နှိုက်တာကို ခံရနိုင်ပါတယ် ကိုမျိုးကြီးရေ….
ဟိုက်ရှ်.. ၈ခုဘဲ ရေးလို့ရလားဟင်
၁) သိပ်မလည်ရှာဘူး အကျင့်ကောင်းကြီး
၂) ဘာတွေ လျှောက်တွေး နေတာလည်းတွေ လျှောက်တွေးနေတယ်
၃) တောင်လေလား မြောက်လေလား အပေါ်လေလား အောက်လေလား
၄) သနားပါတယ်ဗျာ မာမီရန်ရဲ့ ချစ်တူလေး
၅) တော်သေးပါရဲ့ ခြေထောက်မို့လို့
၇) ဦးစားပေး အဆင့်တွေကတော့ ပြောင်မြောက်ပ
၈) ယုံဘူးဆို ယုံဘူးဆိုပဲ..
၉) ဘောင်းဘီထဲ လက်နှိုက်ပြီး.. (ဆင်ဆာထိသွားသည် ဒူဝေေ၀)
၁၀) ဂတုံးတုံး လိုက်ပေါ့အေ..
ကဲ.. လာကြ လာကြ ဒီမှာ မာမီဂတုံး တဲ့နော်
မောင်ရန်ရေ.. မင်းဟာဖတ်ပြီး ရီနေတယ် ။
guide လုပ်ဖူးတဲ့မင်းကို ဆရာပုံစံနဲ့ဆိုတာ ပြောပြလို့သာ ယုံရတော့မယ် ။
(၁) ခွအိပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ မင်းမိန်းမ တနေ့ဖြစ်လာမယ့်သူတော့ အသက်ရှူကျပ်မှာ မြင်ယောင်သေးတယ် ။
(၃) အပြင် အိမ်သာတွေ မတက်ချင်တာ တူတယ် ။ အစ်မရန်ကုန်ပြန်တုန်းက အိမ်သာသွားတိုင်း စက္ကူဆောင်ရ ၊ လက်အတွက် sanitiser ဆောင်ရနဲ့ ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် စိတ်ညစ်တယ် ။
(၄) အောင်မလေး.. မလွယ်ဘူးဟဲ့ ။ ကောင်မလေးကတောင် ပြန်စောင့်ပေးရတယ်တဲ့ ။
(၈) နောက်တခါ ဆံပင်မညှပ်ဘဲ ဆံပင်အရောင်ဆိုးကြည့်ပေါ့ ။ ဒါမှ တကယ် နီဂရိုးမလေးတွေရဲ့ ကိုကိုဖြစ်သွားမှာ ။
oh my goodness, you are like, so weird! haha, just kidding.. i'm glad everyone is having fun playing this game.
ကိုတက်စလာနဲ့ ကိုရန်နဲ့ သိပ်ရယ်ရတာပဲ
မင်းသားကြီး ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတယ် ကြည့်ဦး
ဂွတ်တယ်ဗျိူ့ ... ခင်ဗျားစာသားတွေ
ဟိုးတုန်းက tag game ဆိုတဲ့ဘလော့ကိုတစ်ခါရောက်ဖူးတယ်။ ကိုရန်အောင့်ဟာတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူး။
ဒီနေ့သတိရလို့ထပ်သွားလိုက်ပြီး ကိုရန်အောင့်ဟာ ဖတ်လိုက်တာ ရင်ဘတ်ကိုနာရောပဲ။
ညကြီးဆိုတော့အားလုံးကအိပ်နေတာလေ အသံမထွက်အောင် အောင့်အောင့်နေရတော့ ရင်ဘတ်နာတာ အူမတက်ဘဲနဲ့။
အော် ငါ့ နှယ် ညမှသွားဖတ်မိတာကိုး။ အရမ်းကိုရယ်ရတယ်။ ပြန်တွေးလေရယ်ချင်လေပဲ။